PressReader - Ilanga: 2017-09-07 - Kalulona iqiniso udaba lwaseMasibumbane High School
Kalulona iqiniso udaba lwaseMasibumbane High School
Ilanga - 2017-09-07 - Imibono - Ithunyelwe ngezokuxhumana emnyangweni wezemfundo KwaZulu-Natal
MHLELI: Sithanda ukuphawula mayelana nodaba olushicilelwe yiLANGA mhla zingama-31 kuNcwaba (August) wezi-2017, obelunesihloko esithi, “Uncishwe ukudla washona umfundi.”
Siqala ukubona lolu daba siwumnyango wezemfundo, sibe nokungabaza ngobuqiniso balo kodwa saba nokukhathazeka okukhulu.
Imibuzo esizibuze yona mibili: owokuqala uthi ngabe ubesehlale isikhathi esingakanani lo mfundi engadli ukuthi kungaze kuthiwe uselambe waze wabulawa yindlala. Siphinde sazibuza ukuthi ILANGA ngabe lisebenzise buphi ubuchwepheshe ( post-mortem) ukuze liqinisekise lize lishicilele ukuthi umfundi ubulawe yindlala.
Njengomnyango okhathalele inhlalakahle yabafundi, sibe sesilusukumela lolu daba, siphatheke kabi, sifuna izimpendulo. Sixhumane nesiFunda iZululand ukuze sithole ingqikithi yalo.
Thina senze okwehlukile kunephephandaba ILANGA, sifune ukusebenzisa i- post mortem njengesisekelo sombiko wethu.
I- post mortem ithole okwehlukile kunalokhu “okutholwe” yiphephandaba ILANGA.
Sikhuluma nje, unina womntwana okunguyena otshele ILANGA ukuthi umntwana ubulawe yindlala, unayo imiphumela ye- post mortem, isho okuhluke kakhulu kulokhu okushicilelwe ILANGA futhi esikubona njengokuthunaza nokudicilela phansi isithunzi somnyango nokuwenza ubukeke kabi emphakathini.
Kuleli qophelo sinxusa ILANGA likhulume nonina wontwana ukuze alinike okushiwo yi- post mortem, yilapho kuzotholakala khona iqiniso ukuthi yini ngempela eholele ekudluleni komntwana.
Yilapho kuzocaca khona ukuthi yisiphi isimo umntwana abebhekene naso nanokuthi yiliphi iphutha elenzekile eliholele ekudluleni kwakhe.
Ngokuzayo, singajabula uma ILANGA lingaqinisekisa elibika ngakho ngaphambi kokushicilela into ezokwenza umonakalalo emnyangweni kahulumeni. IMPENDULO SIYABONGA ngokusibhalela kwenu ngenxa yalolu daba olubucayi kangaka. Sibonga siyanconcoza nangeziyalo zophiko lwezokuxhumana lomnyango olubona izimbobo endleleni udaba lwethu olubhalwe ngayo kodwa okusidida kakhulu wukuthi kwenziwa yini umnyango usukume ngoba usubone udaba lweLANGA ngoba umzali womfundi uthi uze waluphosa kuleli phephandaba nje, emnyangweni ubeshaywa indiva.
Lokhu kwenza sibone ukuthi umnyango usukuma ngoba izinkinga sezibikwe kwabezindaba. Lo mfundi udlule emhlabeni mhla zili10 kuNhlaba (May) njengoba unina eze wabhalela ILANGA zingama-28 kuNcwaba (August) ekhala ngakho belu ukushaywa indiva kodaba lwakhe emnyangweni.
Kuyishwa-ke ukuthi umnyango kahulumeni usubona ILANGA lidala umonakalo kuwona. Umzali utshele leli phephandaba ukuthi kunezibhalonyazi (e-mails) azithumele kuMnu Ndlovu, ongumqondisi wezemfundo, noMadlala osehhovisi likangqongqoshe mayelana nalolu daba - ngaphambi kokuba alubike eLANGENI - kodwa konke lokhu kwafana nokuthela amanzi emhlane wedada.
Ngabe bonke laba bantu kababonanga ukuthi bathunyelelwe lezi zibhalonyazi njengoba uMnu Kwazi Mthethwa, okhulumela ungqongqoshe, ethe kabalwazi lolu daba ngesikhathi ephawula ELANGENI?
Hhayi ukuthi umnyango siyawehlulela kodwa njengoba uthi wona ukhathalele inhlalakahle yabafundi, kwenziwa yini ubungazi ukuthi kunomfundi oshonele esikoleni sawo mhla zili-10 kuNhlaba - noma ngabe kuthiwa-ke ubulawe yini - uze uxhumana nesifunda emuva kodaba lweLANGA? UMhleli weziNdaba